बाँच्नको लागि उत्तम स्थान
लेखक द्वारा: अधिकतम Csern मे,, २०२१
ग्रह पृथ्वीमा बस्नको लागि उत्तम ठाउँ कसरी निर्धारण गर्ने? - मेरो आफ्नै अनुभवबाट, अन्य ब्रह्माण्डोपलिटन्स र विशेष संगठनहरूको प्रतिक्रियाको साथ।
हरेक वर्ष हजारौं व्यक्तिहरू एक राम्रो जीवनको खोजीमा अन्य देशहरूमा बसाइँ सर्छन्। यो तिनीहरूको भलाईलाई बढाउने र सम्मानित भविष्यको साथ बच्चाहरूलाई प्रदान गर्ने इच्छाको कारण हो। कहिलेकाँही कारण आप्रवासीहरूको विश्वव्यापी चाहनामा निहित हुन्छ जसले आफ्नो स्वाद र प्राथमिकताहरूको आधारमा विशेष देश चयन गर्दछ। र, अवश्य पनि, सबैभन्दा सामान्य कारणहरू मध्ये एक आधिकारिक विवाह, अध्ययन र काम हो। कसरी निर्धारण गर्ने बस्ने उत्तम ठाउँ पृथ्वीमा? - मेरो आफ्नै अनुभवबाट, अन्य ब्रह्माण्डोपलिटन्स र विशेष संगठनहरूको प्रतिक्रियाको साथ।
परामर्श कम्पनी रेजोनान्स कन्सल्टन्सीले विश्लेषणात्मक अनुसन्धान र मूल्यांकन सर्वसाधारणलाई प्रस्तुत गर्‍यो बस्नका लागि उत्तम शहरहरू २०२१ मा सूचीमा आरामदायी जीवन र काम गर्ने अवस्थाको साथ मनोनीत व्यक्तिहरू समावेश छन्।
जीवनको लागि सबैभन्दा आकर्षक मेगासिटीहरूको लागि चयन मापदण्डले निम्न बुँदाहरू समावेश गर्दछ:
भौगोलिक स्थान र महामारी विज्ञान स्थिति (मौसम सर्त, सुरक्षा, कोरोनाभाइरसको साथ मानिसहरुको संख्या)।
स्थानीय जनसंख्याको मानसिकता: प्रथा, आप्रवासीहरूप्रति दृष्टिकोण र साथ साथै विश्वविद्यालय शिक्षा सहित व्यक्तिहरूको संख्या।
विकसित पूर्वाधार (संग्रहालय, थिएटर, स्टेडियम, विश्वविद्यालयहरू, आदि) को उपस्थिति।
जीवित स्तर: बेरोजगारी, जनसंख्याको आम्दानी, कुल सहरी उत्पादन (कुल शहरी उत्पादन)।
सांस्कृतिक र मनोरन्जन अवसरहरू: रेस्टुरेन्टहरू, क्याफेहरू, नाइटक्लबहरू, आदि।
खोजी ईन्जिनहरूमा खोजीको फ्रिक्वेन्सी, सामाजिक नेटवर्कमा ट्राभल समीक्षा र ह्यासट्यागहरू।
सब भन्दा लोकप्रिय, पहिलो तीन स्थानहरू लिने सम्मानहरू युके - लन्डन, संयुक्त राज्य अमेरिका - न्यू योर्क र फ्रान्स - पेरिसमा थिए। शीर्ष दशमा युरोप, एशिया र संयुक्त राज्य अमेरिकामा मेगालोपोलिजहरू सामेल छन्।
शीर्ष १० रेजोनस परामर्श द्वारा:
लन्डन, ग्रेट ब्रिटेन)। "फोगी एल्बियन" ले लगातार years बर्षमा पदमा अग्रणी पद ओगटेको छ: बस्ने उत्तम शहर। लन्डन मनोरन्जनका लागि हरियो क्षेत्रहरु को उपस्थिति को लागी १th औं स्थान मा छ: राज्य पार्क, पहिले शाही शिकार बस्ती, आदि। कोविड महामारीले पुरानो महानगरपालिकाको बाटोमा आफ्नै परिवर्तनहरू गरेको छ: बासिन्दाहरूले आफूसँग भएको कुराको बढी मोल गर्न थाले। तर यो जस्तो हुन सक्छ, धनी र गरीब बीचको अन्तर विनाशकारी बढ्दैछ।
न्यू योर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका)। एट्लान्टिक महासागरको किनारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो महानगरीय क्षेत्रहरू मध्ये एक। गगनचुम्बी शहर र अमेरिकाको स्वतन्त्रताको भावनाको मूर्त रूप। धेरै पर्यटकहरूको लागि मनपर्ने गन्तव्य र यस ग्रह भरबाटै प्रवासीहरू - वास्तवमा "अमेरिकी ड्रीम"। गत शताब्दीको s० को दशकदेखि यहाँ बसोबास गर्ने र सामाजिक जीवनको सक्रिय मार्गमा हिंड्ने रूसी समुदाय स्थायी बसोबासको लागि नयाँ व्यक्तिहरूसँग प्रतिवर्ष भरिन्छ। अमेरिकाको वर्तमान प्रतिकूल महामारीविज्ञानको अवस्थाको बाबजुद पनि जीवनस्तर उच्च नै रहेको छ। अनुमानका अनुसार मार्च २०२१ मा अमेरिकीहरूको औसत तलब लगभग $००० डलर (करीव 70००,००० रुबल) थियो।
पेरिस, फ्रान्स)। प्रख्यात वाक्यांशलाई "पेरिस हेर्नुहोस् र मर्नुहोस्" भन्ने शब्द लेख्न धेरै पर्यटकहरू विश्वस्त भई भन्छन्: "हेर्नुहोस् र रहनुहोस्।" आतंकवादी आक्रमणले फ्रान्सेली राजधानी तोड्न सकेन: यो फेरि निको भयो र फस्टायो र धेरैको लागि रह्यो बस्ने उत्तम शहर। पेरिस स muse्ग्रहालयहरूको स of्ख्याको आधारमा 5th औं र पर्यटनका लागि पूजा स्थलहरूको सन्दर्भमा 7th औं स्थानमा थियो। सीइनमा पौंडी खेल्ने अधिकारकर्ताहरूको अनुमतिले पेरिसवासीहरू आफैं ग्रीष्म Parisतुमा पेरिस छोड्न चाहँदैनन्।
मस्को, रसिया)। रूसी राजधानी विदेशीहरूको लागि स्वादिष्ट निवाला हो। तिनीहरू दुबै जीवन स्तर र तलबबाट सन्तुष्ट छन्। तिनीहरूले सजिलैसँग संचार फेला पार्छन् र रूसी समाजमा स्वीकार्य छन्। मस्को एउटा बहुराष्ट्रिय राजधानी हो, विकसित बुनियादी संरचना, मनोरन्जनका लागि रमणीय ठाउँहरू, पुरातन इतिहास र धेरै आकर्षणहरू। धेरै विदेशीहरूको लागि, उनी संसारको सबै भन्दा राम्रो शहर। २०१ football को फुटबल च्याम्पियनशिपले सम्पूर्ण विश्वलाई यसको मापन र जादूगर प्रकृतिले प्रभावित गर्‍यो, धेरै देशका बासिन्दाहरूको लागि बिल्कुलै भिन्न रूस खोल्यो र देशको संस्कृतिमा उनीहरूको चासो बढायो। साथै, नवनिर्मित सबवेले रमाइलो गर्न सक्दैन - घरेलु गौरव जुन सजिलै पश्चिमी मेट्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।
टोक्यो, जापान) यसमा हुने प्राकृतिक प्रकोपको बावजुद भविष्य महानगरपालिका, सुरक्षितहरू मध्ये एक मानिन्छ। टोकियो समृद्धिका लागि शहरको परेडमा तेस्रो स्थानमा छ: बेरोजगारहरूको संख्यामा ११ औं, ग्लोबल headquarters०० मुख्यालयको संख्यामा चाँदीको पेडस्टल, र रेस्टुरेन्टहरूको उपलब्धतामा दोस्रो स्थानमा छ। टोकियोले यसको पाक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रभाव पार्छ।
दुबई, युएई) सुनहरा बालुवा र हिन्द महासागरको खाडी बीच अरब लक्जरी। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटन केन्द्र - दुबई। एक सहरमा ओरिएन्टल परम्पराहरू अल्ट्रामोडेर्निटीसँग नजिकै मिल्दोजुल्दो छ। कोरोनाभाइरस महामारीको कारण, पर्यटक प्रवाह द्रुत रूपमा कम भएको छ। यस तथ्यले देशको अर्थव्यवस्थालाई असर गर्यो, तर आलोचनात्मक रूपमा होइन। दुबई सबैभन्दा बढी हुन जारी छ बस्ने उत्तम ठाउँ धेरै आप्रवासीहरूका लागि।
सिंगापुर एसियाली टापु राज्य-मेगालोपोलिसले 50० बर्षमा धेरै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ - आर्थिक रूपमा कमजोर र अविकसित पोलिसबाट यो पूर्वी शक्तिमा परिणत भएको छ। यसको डिजाइनर एयरपोर्ट र वास्तवमा, वर्षा आँधीवन्धका लागि प्रसिद्ध, विश्वको सब भन्दा अग्लो इनडोर झरना।
बार्सिलोना, स्पेन) वास्तुकला, रचनात्मक र समुद्री किनार क्याटालान राजधानी पर्यटकहरूका लागि चुम्बक हो किनकि महामारीको समय कठिन समयमा गुज्रिरहेको छ। धेरै बारहरू, जुन भ्रमण गरिएको पाहुनाहरूको अभावका कारण असंख्य तटवर्ती क्षेत्रमा बन्द छ, कहिले पनि नहुन सक्छ।
लस एन्जलस, संयुक्त राज्य अमेरिका)। पर्यटक र पाक शहर एन्जिल्स बिस्तारै कोविड १ after पछि यसको होसमा आउन थालेको छ, तर यसले यसलाई विश्वमा उत्कृष्ट megacities बाँकी हुनबाट रोक्दैन।
म्याड्रिड, स्पेन)। स्पेनको राजधानी शीर्ष १० मा एक नयाँ आगमन हो, तर यो लामो समय देखि पर्यटकहरु को लागी केहि देखिएको छ। राजधानीको अर्थव्यवस्था एकदम विकसित छ र प्रगतिको लागि प्रयास गर्न रोक्दैन। शहरको स्वास्थ्यको लागि रमाइलो मौसम छ, र प्राय: राम्रो मौसम, जुन आगन्तुकहरूका लागि राम्रो खबर हो। नाइट लाइफ महामारी (मनोरंजनको लागि रेटिंगमा 6th औं स्थान) पछि पुन: सुधार हुँदैछ, शहरी योजनाहरूको विकास जारी छ।
आतिथ्य र आप्रवासीहरु को दृष्टिकोण
बस्नका लागि उत्तम ठाउँ कहाँ छ पर्यटक र स्थायी आधार मा रहन चाहनेहरु? धेरै देशहरूमा, ती पाहुनाहरूप्रति स्थायी निवासको लागि मित्रवत मनोवृत्ति देखाउँछन्। महामारी भन्दा पहिले यी शहरहरूले समावेश गरे: एलिसेन्टे, मलागा, लिस्बन, भ्यालेन्सिया, ब्यूनस आयर्स र अन्य। २०२० को Expat Insider रेटिंग अनुसार सब भन्दा वफादार Iberian प्रायद्वीप हो।
स्पेनिश एलिसान्टे र पोर्तुगाली लिस्बन धेरै मित्रैलो छन्: आगन्तुकहरू जीवन स्तर, सांस्कृतिक मनोरन्जन र छिटो भाषा सिक्ने क्षमताले सन्तुष्ट छन्।
अर्को देशमा बसाइँ सर्न कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो हुन्छ: देशहरूका अधिकारीहरूले खोजीमा संसारभर यात्रा गर्नेहरूलाई कडा व्यवहार गर्छन् बस्नका लागि उत्तम शहरहरू। यो अक्सर सार्नको लागि राम्रो कारणहरू हुनु आवश्यक हुन्छ: एक आधिकारिक विवाह, एउटा काम वा शानदार पूंजीको उपस्थिति।
एक निवास अनुमति प्राप्त वा नागरिक बन्ने अवसर लगानीकर्ताहरु बीच बढ्छ। मौद्रिक लगानीको कार्यक्रममा भाग लिनको लागि तिनीहरू राज्यको आर्थिक विकासमा निश्चित मात्रामा योगदान पुर्‍याउँछन् जहाँ उनीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। आप्रवासी विदेशीहरूले एक व्यवसाय खोल्न, घर / अपार्टमेन्ट किन्न सक्छन् वा धन जम्मा गर्न सक्छन्।
स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीसमा लगानी कार्यक्रमहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। यसमा लगानी गर्न तयार रहेका अन्य देशहरूका आर्थिक रूपमा सुरक्षित नागरिकहरूलाई आश्रय दिन पनि अमेरिका खुशी छ। निवासको लागि घोषित आवेदक होस्ट देश मा एक ठूलो लगानी को माध्यम बाट एक विदेशी महानगर मा स्थायी निवास को लागी सार्न सक्छ।
कम्फर्ट र सफाई
भियना शीर्ष १० को 32२ औं स्थानमा छ, र सबैभन्दा धेरै मध्ये एक मानिन्छ बस्ने ठाउँहरू संयोगले होइन। यो ऐतिहासिक अनुहार, विकसित अर्थव्यवस्था, वास्तु स्मारक र संस्कृतिको साथ एक आश्चर्यजनक सुन्दर शहर हो। शहरको विकसित पूर्वाधारमा, हरी मनोरन्जन क्षेत्र, पार्क, कफी घरहरूको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ छुट्याइएको छ। भियनाका बासिन्दाहरू सार्वजनिक यातायातका प्रशंसकहरू हुन्, त्यसैले तिनीहरू निजी कारहरूमा धेरै सर्दैनन्, जसले गर्दा सडकको सफाई र धेरै हदसम्म ताजा हावाको संरक्षण हुन्छ। भियना २०२१ मा मान्यता प्राप्त छ बस्ने उत्तम शहर पारिस्थितिकीको हिसाबले।
अस्ट्रियाले स्वेच्छाले आप्रवासीहरूलाई पछिल्लो आर्थिक घुलमिलको साथ स्थायी रूपमा बसोबास गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, पूँजी लगानी आवश्यक पर्दैन, तर निवास अनुमति वा नागरिकताका लागि आवेदकहरूले उनीहरूको आर्थिक क्षमताको प्रमाण दिन आवश्यक छ। यो आवश्यकता अर्को सर्तमा आधारित छ: एक वर्षमा लगभग months महिनाको लागि देशमा रहन।
जीवनको स्तर र गुणस्तर
ज्यूरिख आर्थिक केन्द्र र स्विजरल्याण्डको सब भन्दा ठूलो शहर हो (यसको सानो जनसंख्या - 428२000,००० मान्छे भए पनि) १०० को शीर्ष श्रेणीमा 36 100 औं स्थानमा छ। धेरै प्रवासीहरूको अनुसार संसारको सबै भन्दा राम्रो शहर कल्याण र समृद्धि को मामला मा। आरामदायक, राम्रो संग, बुर्जुवा समझदार र अत्यधिक व्यापार जस्तो, ज्यूरिखले सबै ग्रहबाट वालेटहरू आकर्षित गर्दछ। दुबै जीवन र व्यवसायको लागि समान रूपमा राम्रो। बेरोजगार नागरिकहरूको संख्या ks औं हो। शहर ग्लोबल 9०० कम्पनीको शीर्ष दशमा छ।
स्विजरल्याण्डले धनी र स्वतन्त्र आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको लागि आमन्त्रित गर्दछ, तर ,450000०,००० फ्रान्कको वार्षिक एकमुष्ठ कर तिर्ने सर्तसँग। निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि, तपाई ज्यूरिखमा बर्ष लगभग २०० दिन बस्नु पर्छ - यो स्वीस अधिकारीहरुको आवश्यक आवश्यकता हो।
धेरैको लागि सबै भन्दा राम्रो देश बाँच्न को लागी र व्यवसाय गर्नु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका को हो। स्टार्टअप जेनोमका अनुसार न्यु योर्क, सान फ्रान्सिस्को र लन्डन स्टार्टअप बनाउनका लागि सबैभन्दा सम्मानजनक शहरहरूको सूचीमा समावेश छन्।
अमेरिकाको हार्ट अफ सब भन्दा धेरैको सूचीमा दृढताका साथ दोस्रो स्थानमा छ, सांस्कृतिक घटनाहरू र केन्द्रहरूको मात्रै होइन, रोजगार खोजमा र सबै प्रकारका व्यवसायिक विचारहरूको कार्यान्वयनमा पनि। न्यु योर्क ग्लोबल अफिसको संख्याका आधारमा चौथो स्थानमा छ।
स्यान फ्रांसिस्कोले यो सूची प्रविधिको संस्थाको एक सम्पूर्ण क्षेत्र को उपस्थिति को लागी बनाएको - सिलिकन भ्याली। यो महानगर विश्वविद्यालयको शिक्षाका साथ धेरै स्मार्ट व्यक्तिहरूको घर हो, र तीमध्ये विदेशीहरूको प्रतिशत मात्र ठूलो छ। कुन सहरमा बस्नु राम्रो हो? - न्यू योर्क वा स्यान फ्रान्सिस्को - सबैले आफैंको लागि निर्धारण गर्छन्, तर अमेरिकी माइग्रेसन कम्पनीको आवश्यकताहरू सबैका लागि समान हुन्।
अमेरिकामा बस्नका लागि योग्य हुन, आप्रवासीहरूले भिसा लिनै पर्छ: EB5 ($ 900000 को लगानीको साथ) वा E2 ($ 100000)। EB5 ले निष्क्रिय लगानीलाई ग्रहण गर्छ, जसमा कम्पनीको काममा भाग लिन आवश्यक पर्दैन। E2 को अर्थ संयुक्त राज्यमा व्यवसाय खोल्नु हो। केवल पहिलो विकल्प रूसीहरूलाई उपलब्ध छ, जुन धेरैको लागि धेरै सुविधाजनक र लाभदायक छैन किन कि उनीहरूले अर्को २ बर्ष कुर्नुपर्नेछ। थप रूपमा, रकम ज्यादै ठूलो छ। तर तपाई अन्य तरिकाले जान सक्नुहुन्छ: पहिले ग्रेनाडा (एक देश जुन अमेरिकीहरूसँग सम्झौता गरिएको छ) को नागरिकता प्राप्त गर्नुहोस्, जबकि राहदानीको लागि $ १,2,००० तिर्ने। र त्यस पछि, अमेरिकी E15000 भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ग्रेनाडा र E2 को नागरिकताका लागि तुरून्त आवेदन दिन, तिनीहरू २ 2०,०००% लगानी गर्छन्।
लन्डनले धेरै बर्षदेखि मिलियन प्लस शहरहरूको विश्व चार्टमा जीवन स्तरको आधारमा अग्रणी स्थान ओगटेको छ। जनसंख्याको उच्च आय, विकसित पूर्वाधारको उपस्थिति: वास्तुकला स्मारकहरू, विश्वको सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, आदि। उसलाई पहिलो हुन मद्दत गर्दछ। युनाइटेड किंगडमले एक इजाजतपत्र जारी गर्दछ - अंग्रेजी बोल्ने राज्यको विकासमा २ लाख भन्दा बढी स्टर्लिंग लगानी गर्न चाहने सबै धनाढ्य विदेशीहरूलाई तीन वर्षको लागि लगानीकर्ता भिसा। धनी आप्रवासीहरू, बेलायतको अनुदान पछि, बाँच्न, कार्य गर्न र यसमा अध्ययन गर्न सक्दछन्।
संसारको सबै भन्दा राम्रो शहर लिस्बन ठीक नै छुट्टी गन्तव्य मान्न सकिन्छ। यो विश्वको सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो सहर हो, पश्चिमी यूरोप र पोर्चुगलको मुख्य बन्दरगाह। भूमध्यसागरको रमाइलो वातावरणको लागि धन्यवाद, लिस्बनमा तातो सबैभन्दा धेरै यूरोपीय जाडो र वर्षमा धेरै घमाइलो दिन छ। यो एक रिसोर्ट र सुरक्षित शहर हो जसको जनसंख्या 500००००० भन्दा बढी छ। पोर्तुगल - सबै भन्दा राम्रो देश बाँच्न न्यानो मौसम र पानीको ठाउँ मन पराउनेहरूका लागि: एट्लान्टिक महासागर नजिकै अवस्थित छ। २०२० मा, दक्षिणी देशलाई युरोपियन यात्रामा पहिलो नम्बर तोकिदियो।
कोस्मोपोलिटनहरूले लगानीको सहयोगमा पुर्तगालमा निवास अनुमति प्राप्त गर्दछन्: कम्तिमा २ 250000०,००० युरो। स्थायी निवासको लागि बसोबास गर्न चाहनेहरू बीच एक लोकप्रिय कार्य भनेको घर जग्गाको खरीद हो: house ००,००० युरोबाट घर वा अपार्टमेन्ट।
सबैभन्दा स्वादिष्ट शहरको खानाको श्रेणीमा, लन्डन प्राय: पहिलो स्थानमा पर्दछ, Michelin० भन्दा बढी मिशेलिनले तारांकित रेष्टुरेन्टहरूसँग। लन्डन पाक प्रतिष्ठानले उनीहरूका पाहुनाहरू र बासिन्दाहरूलाई मासु, माछा, तरकारीबाट मौलिक र उत्कृष्ट व्यंजनहरू प्रदान गर्दछ। इ England्ल्यान्डको राजधानी अझै जारी छ बस्ने उत्तम शहर र सांस्कृतिक र पाक अर्थमा।
टोक्यो जस्तो एक पेट्रोनोमिक केन्द्र (रिसोनान्स सूचीमा 5th औं )लाई उपेक्षित गर्न सकिदैन। २230० रेष्टुरेन्टहरू मिशेलिन ताराहरू हुन्। प्रायः प्राकृतिक सामग्रीहरूको साथ धेरै सयौं विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनहरू उनीहरूको मौलिकता र अद्वितीय स्वादको साथ पर्यटकहरूलाई अचम्मित पार्छन्। चहान, इमोनि, वागाशी, सुशी - बनाउदै गउरमेट्स प्रेममा परिणत हुन्छन् र जापानी शहरमै रहन्छन् जसमा प्रायजसो जापानी खानाको मजा लिन सक्छन्।
जापानमा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ, किनकि यो सघन जनसंख्या भएको साना देश हो। तपाईं निम्न सर्तहरूमा जापानी पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
एक जापानी नागरिक / नागरिक संग कानूनी विवाह;
कम्तिमा of बर्ष राज्यको इलाकामा निवास (सबै आवेदकहरूको लागि आवश्यक)।
दुबै बोल्ने र लिखित जापानीको राम्रो कमान्ड;
जापानमा औपचारिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै, कर्मचारीको उच्च व्यावसायिकताको अधीनमा;
आवेदकको कम्तिमा $ २$,००० हुनुपर्दछ।
यदि तपाईंले राइजिंग सूर्यको राजधानीमा $ 50000 लगानी गर्नुभयो भने तपाईं जापानी अधिकारीहरूलाई निवास अनुमति जारी गर्न मनाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्न, तिनीहरूले आफ्नै व्यवसाय खोल्छन्, जुन उनीहरूले निरन्तर समर्थन र विकास गर्दछन्, शहरवासीहरूको लागि रोजगारी प्रदान गर्दै। एकै साथ लगानीको मात्रा निरन्तर बृद्धि गर्नुपर्नेछ।
टोकियो हुनेछ संसारको सबै भन्दा राम्रो शहर स्थायी निवासको लागि, यदि तपाईं सबै आवश्यकताहरूको पालना गर्नुहुन्छ भने, देश र यसका चलनहरूलाई सम्मान गर्नुहोस् र यसको अर्थव्यवस्थामा पर्याप्त योगदान गर्नुहोस्।
ती स्थानहरूमा घर जग्गा किन्दा लाभदायक छ जहाँ बस्नको लागि उत्तम ठाउँ होउदाहरण को लागी - बार्सिलोना मा। यो भूमध्यसागर किनारमा विकसित उद्योग र व्यापारको साथ एक स्पेनिश शहर हो, र पर्यटन मार्गको एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु। यस सुन्दर ठाउँले प्रत्येक बर्ष महामारीको पहिले हजारौं पर्यटक आकर्षित गर्‍यो, र महामारीको समयमा यो पहुँचको लागि बन्द गरिएको थियो, जसले पोर्तगाली अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सकेन, र विशेष गरी घर जग्गाको बजार। Spain०% छुटमा स्पेनमा आवास खरीद गर्न अब सम्भव छ, र २०२० को अन्त्यसम्ममा प्रति वर्ग मिटर लागत १ 30 2020 १ यूरो भयो। जब पर्यटक बार्सिलोना फर्कन्छ, मूल्यहरु माथि जान्छ। यस समयमा रियल ईस्टेटमा लगानी गर्नेहरूले सीमाना खुल्दा भाँडा वा बिक्रीबाट आय प्राप्त गर्न सक्दछन्।
बार्सिलोना को पनि कॉसमपोलिटानहरु को लागी एक लगानी कार्यक्रम छ: शहर को आर्थिक को लागी योगदान 500000 यूरो को लागी हुनेछ।
मध्येको एउटा बस्ने ठाउँहरू भविष्यमा एथेन्स बन्न सक्छ। तिनीहरू लाभदायक मेगासिटीहरूको सूचीमा २ th औं स्थानमा छन्। ग्रीसको राजधानी जीवनको लागि उत्कृष्ट मौसम अवस्थाको साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक केन्द्र हो। यसमा बस्ने लागत अन्य रेटेड शहरहरूको तुलनामा धेरै कम छ, जुन पर्यटकहरूलाई खुशी पार्न सक्दैन। ग्रीक राजधानीको क्षमता हरेक बर्ष बढ्दैछ, किनकि यसको सरकार आर्थिक सुधारमा गम्भीर भई लागिरहेको छ, जसमध्ये मुख्य भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई हो।
एथेन्स बस्न चाहने मानिसहरु लाई २ in०,००० युरो देखि लगानी गर्नु पर्छ।
कुन सहरमा बस्नु राम्रो हो? - व्यक्ति आफैले निर्णय लिन्छ। यो यस्तो हुन्छ कि महानगरको भ्रमण गरे पछि, एक पर्यटकलाई यत्ति धेरै प्रेम हुन्छ कि उसले प्रारम्भिक चालको सपना देख्छ। यो हाम्रो योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक छ, तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि अर्को देशमा पुनर्वसन अनुकूलन र तनाव बिना हुँदैन, र यो आर्थिक सहयोग बिना व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ।
AAAA ADVISER ले तपाईंलाई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रवेशमा रुचि राख्ने देशहरूमा लगानी प्रोजेक्टहरूमा सहभागी हुन मद्दत गर्दछ। AAAA ADVISER आप्रवासीहरु द्वारा लगानीमा आधारित आधिकारिक नागरिकता कार्यक्रम को लागी एक इजाजतपत्र एजेन्ट हो। यहाँ तपाइँ एक लगानी द्वारा एक निवास अनुमति वा नागरिकता प्राप्त को सबै मुद्दाहरु मा मद्दत र विशेषज्ञ सल्लाह प्राप्त हुनेछ।
हाम्रो विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई आवास अनुमति, स्थायी निवास र दोस्रो नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सबै विकल्पहरूको बारेमा सल्लाह दिनेछौं +79100007020
हाम्रो पूर्ण साइट भ्रमण गर्नुहोस्: VNZ.SU
↑ बस्ने उत्तम ठाउँ ↑ सबै भन्दा राम्रो देश बाँच्न ↑ कुन देशमा बस्न राम्रो छ ↑ कुन सहरमा बस्नु राम्रो हो? ↑ विश्व मा सबै भन्दा राम्रो देश ↑ संसारको सबै भन्दा राम्रो शहर ↑ सबै भन्दा राम्रो देश बाँच्न ↑ बस्ने उत्तम शहर ↑ जहाँ बस्नको लागि उत्तम ठाउँ हो ↑ बासस्थान देश ↑ बस्ने शहर ↑ निवास अनुमति देश ↑ स्थायी निवास देश ↑ स्थायी निवास को लागी ↑ देश छोड्नुहोस् ↑